किन तपाईं युरोप मा यात्रा गर्नुपर्छ वसन्त मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > किन तपाईं युरोप मा यात्रा गर्नुपर्छ वसन्त मा
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 30/01/2021)
सबैले लागि वसन्त को सपना छ न्यानो मौसम. यसलाई सधैं युरोप मा एक सुन्दर समय जब जाडो को हिउँ वसन्त को चमक नवीकरण को लागी बाटो बनाउँछ. पार्क र बगैंचाहरु जीवित हुन्छन् र शहरहरू फेरि जीवित हुन्छन्. वसन्त मा युरोप मा यात्रा, को को अगाडी गर्मी throngs, पनि थोक आफ्नो लागत अनुकूल काँध-सिजन दर तल राखन गर्दा युरोपेली भीडलाई एक शानदार समय छ. हामी सबैभन्दा मोहक केही मा एक नजर, रोमाञ्चक, र वसन्त मा युरोप मा यात्रा को लागी आश्चर्यजनक स्थानहरु.
वसन्त मा युरोप मा यात्रा गर्दा मनमा आउने पहिलो कुरा:
वसन्त फल र तरकारी मा युरोपेली बजार (र रेस्टुरेन्ट!)
Airfares हो सस्तो
होटल हो सस्तो
भाडा कार मा आरक्षित गर्न सजिलो छन् सम्झौता मूल्यहरु.
संग्रहालय को भीड छैन
गाडिहरु सधैं सस्ता छन् जब तपाईं सुरक्षित एक ट्रेन मा किन्न आफ्नो रेल टिकट.
र अन्तिम तर कम से कम, को यूरोप घर हो. त्यहाँ आफ्नो सडकमा र आफ्नो मनपर्ने रेस्टुरेन्ट clogging कुनै पर्यटकहरु छन् र अब तिनीहरूले खान र शान्ति मा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ समय–र यो छ सस्तो!
वसन्त मा युरोप मा यात्रा गर्दा खाद्य आनन्द:
हामी खाना बारेमा केही लेखहरू लेखेका छौँ. तपाईंले तिनीहरूलाई पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ र यहाँ. यो कुनै आश्चर्य छ त्यसैले हामी रूपमा खाना छ कि हाइलाइट वसन्त मा युरोप मा यात्रा को!
भुना मूल तरकारी को लामो जाडो पछि, रोमी एक तीतो हरियो भनिन्छ puntarella गर्न तत्पर, chicory को फारम. यो लेजिओमा फस्टाउन ढिलो हिउँद reenतु हो. यो वसन्त को harbinger छ, एक सानो तेल र कटा सानो किसिमको माछा संग लुगा. Delish!
इटालियन वसन्त बजारमा, तपाईं धेरै परिचित र धेरै अपरिचित तरकारी पाउनुहुन्छ. त्यहाँ अझै पनि वसन्त मा artichokes हुनेछ (भलाइ धन्यवाद), र तिनीहरूले सस्ती हुनेछ, तर त्यहाँ धेरै प्रकार हुनेछ. हाम्रो मनपर्ने सिसीली र सर्डिनिया को कांटेदार artichokes छ. तिनीहरूले भेडा shoo टाढा गर्न विकसित गर्नुभएको; व्यावहारिक सर्डिनिया हरेक बोट कांटा छ!
अन्य oddities हाम्रो मनपर्ने समावेश, agretti, तपाईं एक सानो तेल र केही लसुन मा saute एक सिमसार घाँस, यदि हल्कासित मसला सबै किनभने यो जन्म यसको ठाउँमा निहित एक saltiness छ. त्यहाँ पनि Cardoons छन् (इटालियन cardoni, को आटिचोक नातेदार) र तस्वीर भनिन्छ lampascione मा प्याज-जस्तो बल्ब, साँच्चै एक पटक थियो जलकुंभी बल्ब को एक विशिष्ट प्रकार povera cucina, गरिब को पकाउने, पुग्लिआ मा एक पक्ष पकवान संरक्षित र अब एकदम आधुनिक भएको छ “तेल मा” वा तेल अन्तर्गत.
फ्रान्स को जंगली स्ट्रबेरी अवश्य हो! पनि rarer, को Aveyron उब्जाउ गर्ने स्ट्रबेरी छन् विशेष र भन्दा पहिले बगैचा स्ट्रबेरी पकाना.
वसन्त पनि दुई महिना निगालो को Cotswolds मा Worcestershire मा Evesham को घाटी मा तिहार को सुरु छ. जर्मनी मा सेतो निगालो सिजन र युरोप को उत्तर मई मा सुरु.
हो, युरोप मानिसहरूलाई सबै बाहिर जाने निगालो मनाउन, सेतो, हरियो, वा जंगली सबै बाहिर आउने रूपमा.
ग्रीस जमघट धेरै नै आत्मा र इटाली जस्तै वसन्त तरकारी धेरै छ.
अब, खाना बारेमा पर्याप्त. वास्तविक यात्रा बारेमा थप!
म हामी सबै जान खराब समय कहिल्यै त्यहाँ भन्ने सहमत गर्न सक्छन् पेरिस. तथापि, त्यहाँ रोमान्स को यस शहर बारेमा विशेष कुरा र मासु Delights वसन्त comeतु आउँछ. यो निश्चित वसन्त मा युरोप मा यात्रा लायक बनाउने!
को आकर्षण पेरिस को वसन्त मा बस भारी छ. शहरमा धेरै प्रभावशाली उद्यान भटक गर्न एफिल टावर अगाडि picnicking देखि, को Seine को बैंकहरू द्वारा dappled wanderings, ताजा croissant र Latte भन्दा घाम बिहान, Pernod र रातो दाखमद्य भन्दा कर्कश Eves - ओखर बगैंचाहरु blossoming घेरिएको, blooming उद्यान, र साँच्चै मनोरम नीलो वसन्त दिन.
सबै भन्दा राम्रो भाग लाइनहरु छ. वा तिनीहरूलाई कमी, हामी भन्नुपर्छ. को Louvre र एफिल टावर लगभग रूपमा Summertime रूपमा बाक्लो छैनन्.
पेरिस वसन्त को एक ठूलो प्लस Nuit des Musee वा छ संग्रहालय को रात. It’s when museums, कला ग्यालरीमा, र शहर भर सांस्कृतिक केन्द्र आफ्नो ढोका एक रातको लागि पर्यटकहरू केही अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ यति खोल्न सबै भन्दा राम्रो कला धेरै फरक दुनिया मा: पूर्ण निःशुल्क र राति धेरै ढिलो.
वसन्त मा युरोप मा यात्रा – पूर्वी युरोप – हंगेरी:
जब खैरो वसन्त गर्न टाढा पतन, हंगेरी राजधानी साँच्चै जीवन आउँछ. हामी पार्टी दृश्य सिफारिस हाइलाइट बुडापेस्ट वसन्त आउन. छन् एक पुरा पाहुना सांस्कृतिक घटनाहरू र प्रदर्शनियां धाउन. पर्यटकहरू अप काखमा सक्नुहुन्छ वार्षिक Pálinka तिहार, माथि को tastings सुविधा 300 ब्रान्डी को प्रकार, जबकि वसन्त चाडमा, दुई-हप्ता शानदार, अर्केस्ट्रल यसको फ्युजन संग जनता मा ड्र, ज्याज र विश्व संगीत प्रदर्शन.
यहाँ बुडापेस्ट वसन्त मा गर्न कुराहरू एक ठूलो सूची छ:
को बुडापेस्ट आँखा को ELTE वनस्पति उद्यान मा चेरी फूल हेर्नुहोस् सवारी
खाना-ट्रक उद्यान मा बाहिर खान
आनन्द एक Breezy BKK नौका सवारी मा एक gluttonous दिन आनन्द खाना चाडहरूमा
Budapest100 समयमा ऐतिहासिक भवनहरु मा पिक खण्डहर बारहरू आइतबार बजार मा बुडापेस्ट वसन्त उचित मा स्थानीय हस्तशिल्प किराना पसलहरू प्राप्त खोज्नुहोस्
शहरमा rubberized चलिरहेको ट्रयाक ट्राभर्स
एक उच्च-उडान सवारी लागि chairlift लिन
सशक्त प्रदर्शनियों स्थानीय शिल्प SIP भ्रमण बियर छत ह्याङआउट मा
वसन्त मा युरोप मा यात्रा को तातो मौसम भाग – ओस्लो, स्पेन:
रोमाञ्चक अन्डालूसी राजधानी जीवनको explodes वसन्त मा: क्याफे र रेस्टुरेन्ट ऊर्जा संग बज. सुन्तला फूल र सेतो सिट्रस ब्लूम छोड्दा, र सांस्कृतिक पात्रो पूरै नयाँ गियर मा पछीको.
तपाईं वसन्त र केहिपनि बारेमा उत्साहित महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने यो मनाउन, त तपाईं सही ठाउँमा छौं. Expect weeks, को partying, नृत्य, र मा flamboyant प्रदर्शनहरू cobblestoned सडकमा. फ्लामेन्को प्रेम पर्नु, र अविश्वसनीय अन्डालूसी भाडा को आफ्नो भरण प्राप्त.
वसन्त मा युरोप मा यात्रा गर्दा अनुभव गर्न एक सुन्दर घटनाको लागि, यसको प्रसिद्ध समयमा ओस्लो टाउको Feria डे अप्रिल, वा वसन्त निष्पक्ष. को ओस्लो निष्पक्ष परंपरागत दुई स्पष्ट सप्ताह पछि सुरु इस्टर सप्ताह, एक विशाल क्षेत्रमा उपचार (नक्सा), शहरको दक्षिण-पश्चिम गर्न, नदी छेउमा. यो गम्भीर नृत्य को एक सप्ताह छ, पिउने, खाने, र समाजिक, लेट रात संग – वा सबै-nighters – आदर्श. अप्रिल उचित गरेको अमरीकी को सरासर आकार असाधारण छ. midday वरिपरि प्रारम्भिक साँझ सम्म – विशेष गरी मङ्गलबार, पहिलो आधिकारिक दिन – वाहनो वा घोडा मा fairground वरिपरि sevilla समाज parades. त्यहाँ दैनिक पनि छन् bullfights, साधारणतया सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ मौसम को.
म्यूनिख अचम्मको वर्ष राउन्ड छ, तर साँचो हाइलाइट यसको वार्षिक समयमा शहर पक्रने छ Fruhlingsfestival, वा वसन्त चाडको, हरेक अप्रिल / मे. Oktoberfest लाग्छ, तर तरिका कम मान्छे संग, तर त्यति रूपमा बियर 😉
वसन्त मा युरोप मा अन्तिम यात्रा – डब्लिन, आयरल्याण्ड
डब्लिन को सडकमा लागि यो महिना जीवन फुट्छ सेन्ट को उत्सव. पैट्रिक दिन. मार्च मा राजधानी गएर यात्री आफ्नो ध्यान खिच्ने प्रशस्त हुनेछ. जाँच गर्नुहोस् निर्देशित पैदल यात्रा डब्लिन पोर्ट को, वा प्रसिद्ध दुई-माइल लामो सेन्ट. पैट्रिक महोत्सव परेड. यो उत्सव सम्पूर्ण span सप्ताह, त्यसैले मा भीडलाई escaping मा योजना को K क्लब, स्थित एक 5-स्टार देश Manor 30 डब्लिन बाहिर मिनेट. एक पुराना 1936 जगुआर घर कार, संगठित व्हिस्की tastings, र घोडा मा ट्रेल्स 550 एकड. हामीलाई साइन अप!
संग टिकट तालिम गियर र पुस्तक मा वसन्त एक ट्रेन सेव रेल यी स्थानहरु कुनै एक भ्रमण गर्न, मिनेटमा!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-spring%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#EuroprinSpring #FoodinSpring europetravel longtrainjourneys वसन्त रेल यात्रा traveltips